Ikhaya > Esona Sibonelelo seNootropic seAlfa GPC ngo-2021
Ngokoluvo lwethu, esona saphulelo se-nootropic Alpha GPC ngo-2021 ukusetyenziswa buqu yi Cofttek I-Alpha GPC. Eyona nto intle malunga noku kongezwa kukuba yimveliso yemifuno / i-vegan kwaye ke, wonke umntu angayithatha. Okubaluleke ngakumbi kukuba, isongezelelo asiqulathanga ngqolowa, i-gluten, ubisi, iqanda, intlanzi kunye namandongomane. Ke ngoko, kufanelekile ukuba isetyenziselwe abantu abanezigulo zee-aleji. Nangona kunjalo, ukuba unayo nayiphi na imeko esele ikho, kufuneka uthethe nogqirha wakho kuqala. Oku zongeza Ufumene uphononongo oluqinisekileyo kuphela kwaye wenza kanye le nto ibanga ukuba uyayenza.
Yintoni elungileyo ye-Alpha GPC?
Ithatha ixesha elingakanani ukuze isebenze iAlpha GPC?
Ngaba iAlpha GPC ikwenza udinwe?
Ngaba ubuchopho bealfa buneziphumo ebezingalindelekanga?
Ngaba unokufumana i-choline eninzi?
Ngaba ungathatha i-Alpha GPC kunye ne-CDP choline kunye?
Ngaba iAlfa GPC yendalo?
Ngaba ubuchopho beAlfa bukhuselekile?
Zithatha ixesha elingakanani iziphumo zeengqondo zikaAlfa?
Ngaba ubuchopho beAlfa busebenza ngokwenene?
Ngaba uJoe Rogan ungumnini weAlfa brain?
Ngaba ubuchopho beAlfa busemthethweni?
Yeyiphi eyona nto ilungileyo yokuxhasa iNootropic?
Loluphi olona nyango lulungileyo lobuchopho?
Ngaba i-Alpha GPC inyusa i-HGH?
Ngaba i-choline ibangela ukudakumba?
Iqulathe ntoni ingqondo yeAlfa?
Ngaba i-CDP choline ikhuselekile?
Zithini iziphumo zeNoopept?
Ngaba i-Alpha GPC yonyusa i-dopamine?
Usebenza ngokukhawuleza kangakanani u-Alpha GPC?
Ziintoni iimpawu zokusilela kwe-choline?
Ngaba i-choline ilungile kwixhala?
Nguwuphi owona mthombo ulungileyo we-choline?
Ndingayifumana njani i-choline ngokwendalo?
Uvavanya njani ukusilela kwe-choline?
Ngaba injani iAlpha GPC?
Ngaba izongezo ze-choline ziyasebenza?
Ngaba i-citicoline iyafana ne-choline?
Ngaba i-citicoline inyusa i-dopamine?
Nguwuphi umahluko phakathi kwe-choline kunye ne-phosphatidylcholine?
Ngaba i-choline ibangela uxinzelelo?
Ngaba i-choline inyusa i-serotonin?
Zithini iziphumo ebezingalindelekanga zecoline?
Ngaba i-choline ikunika amandla?
Ngaba ilecithin ilungile kwixhala?
Zithini iziphumo ebezingalindelekanga zeAlpha GPC?
Kuthatha ixesha elingakanani ukusebenza ngeAlpha GPC?
Ngaba i-Alpha GPC yamanzi okanye i-fat soluble?
Ngaba ubuchopho beAlfa bukhuselekile ekusebenziseni?
Ngaba ukusebenza kwengqondo kuyasebenza?
Ngaba iiNootropics zinokubangela iintloko?
Ngaba i-choline eninzi ingaba yingozi?
Ngaba ungayithatha yonke imihla i-Alpha GPC?
Yeyiphi eyona pilisi yobuchopho ilungileyo kwintengiso?
Ngaba ikofu yiNootropic?
Zeziphi iiNootropics ezisebenzayo?
Ngaba i-CBD yiNootropic?
Zeziphi izibonelelo zeAlpha GPC?
Alpha GPC Ulawulo lwonyusa ukukhutshwa kwe-neurotransmitter acetylcholine kwaye luququzelele ukufunda kunye nememori. Kwiimbaleki, ukuxhaswa kweAlpha GPC kuthintela ukuncitshiswa kokunyanzelwa kokunyusa amanqanaba e-choline, kukonyusa ukusebenza komonde kunye nokukhula kwehomoni.
I-Alpha GPC isebenza ngokunyusa imveliso yamandla asezantsi emva kweentsuku ezi-6 zokuncedisa. Abaqeqeshi bokusebenza kwezemidlalo banokuthathela ingqalelo ukongeza iAlpha GPC kukutya kwesantya kunye neembaleki zamandla ukuphucula ukusebenza kwemisipha.
Kuyakwenza ukuba udinwe ngakumbi ebusuku, kodwa oku kuyavakala ngenxa yomsebenzi osemgangathweni ophezulu owenziwe yingqondo yakho emini. Ewe kunjalo, kufuneka ulale ukuze ingqondo yakho isebenze ngokupheleleyo iinkumbulo ozenzileyo imini yonke.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeAlpha Brain zinqabile. Ngokusekwe kuvavanyo lweklinikhi yeAlfa Brain kunye nobungqina, akukho ngxelo ngeziphumo ezibi zoncedo.
Ukufumana i-choline eninzi kunokubangela ivumba lomzimba eliyintlanzi, ukugabha, ukubila kakhulu kunye nokugcwala, uxinzelelo lwegazi kunye nomonakalo wesibindi. Olunye uphando lukwacebisa ukuba amanani aphezulu e-choline anokunyusa umngcipheko wesifo sentliziyo.
Ezi zixhobo zimbini ze-choline zisebenza kakuhle kunye. … I-Alpha GPC yimveliso ye-phosphatidylcholine (PC). Kwaye i-CDP yeCholine eyongezelelweyo ibonelela nge-uridine efunekayo kwi-PC synthesis. Ithathiwe kunye, ubonelela ngengqondo yakho ngohlobo lwe-choline eyifunayo kanye ezantsi kwinqanaba leselula.
IAlfa GPC yimolekyuli eyenzeka ngokwendalo ehlala ngaphakathi kwingqondo. Esi sondlo sibalulekileyo, sinxulumene ngokusondeleyo nosapho lwe-B-vithamini, ikakhulu sihlala ngaphakathi kwi-membrane yeseli.
I-Alpha Brain yenye yezona zikhuselekileyo izongezo ze-nootropic. Nangona kunjalo, unokufumana iziphumo ebezingalindelekanga ezincinci malunga nokusebenzisana kweyeza okanye xa usebenzisa ngaphezulu kokufunwayo. Yiyo loo nto kufuneka unamathele kwidosi ecetyiswayo kwaye kufuneka udibane nogqirha wakho ngaphambi kokuba uthathe nasiphi na isongezelelo se-nootropic.
I-Alpha Brain ihlala ngaphezulu kweeyure ezingama-6. Ngokolunye uphononongo oluzimeleyo kwiAlpha Brain, iziphumo zinokuhlala ngaphezulu kweeyure eziyi-7-8.
Ukusetyenziswa kwengqondo yeAlfa kwiiveki ezi-6 kuphuculwe kakhulu inkumbulo yomlomo kunye nomsebenzi wolawulo xa kuthelekiswa nolawulo, kwiqela labantu abadala abasempilweni abaneminyaka eyi-18-35. Iziphumo zolu vavanyo kufanelekile ukuqhubekeka nokufunda malunga nokusetyenziswa kokunyusa ukuqonda nezongezo kwintsebenzo yeembaleki.
UJoe Rogan unxulumene nenkampani ebizwa ngokuba yi-Onnit, eyenza iAlpha Brain, imveliso eyenzelwe ukuphucula ukukhumbula ngomlomo kunye nokugqitywa komsebenzi. I-Alpha Brain yenye yeemveliso ezimbalwa kwintengiso enezilingo zeklinikhi kwaye uRogan ukholelwa ukuba kuyamnceda akhumbule amagama kunye namabinzana ngcono kune-placebo.
Ethetha ngale meko, umseki ka-Onnit Aubrey Marcus wathi: “Singatsho ngaphandle kwamathandabuzo ukuba azikho i-amphetamines okanye ezinye izinto ezivaliweyo kwingqondo ye-Alpha. Sivavanya ngokukhethekileyo yonke ibhetshi yengqondo ye-Alpha ngeendleko zethu ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu azinazo naziphi na izinto ezivaliweyo okanye ezingekho mthethweni.
I-Alpha GPC yindawo ekhoyo yendalo ekhoyo efumaneka kwingqondo. Le khompawundi ikhutshwa kwakhona xa i-asidi enamanqatha efumaneka kwisoya nakwezinye izityalo yaphuka. Nangona iAlfa GPC ikhona ngokwendalo, kuxinzelelo lwayo lwendalo kunye nobungakanani, akwanele ukwenza imisebenzi eyilelwe ukuxhasa. Ke, Alpha GPC ihlala ichazwa ukuba isetyenziswe ngohlobo lwezongezelelo zokutya eziqulathe iAlpha GPC eveliswe ngokusebenzisa imichiza okanye i-enzymatic deacylation ye-phosphatidylcholine-eyandisiweyo i-soya phospholipids.
Uphando olwenziwe kwiAlpha GPC kule minyaka luye lwasekwa njenge parasympathomimetic acetylcholine eyandulelayo evuselela inkqubo ye-parasympathetic luvo kwaye ke, iyanceda kunyango lwe-Alzheimer's kunye neendlela ezahlukeneyo zesifo sengqondo esixhalabisayo. I-Alpha GPC yeyona prodrug efanelekileyo kakhulu kwaye ke, izongezo eziqulathe eli qela zisebenza njengomthombo we-choline yokutya. I-Choline sisondlo esibalulekileyo esidinga ukuba umzimba wenze imisebenzi emininzi ebalulekileyo, njengokukhula kweselula kunye nemetabolism. I-Alpha GPC ikwayi-nootropic esebenzayo ekhulisa ukusebenza kwengqondo kwengqondo. Ihlala ichazwa kwizigulana ezindala ezifumana ukwehla kwengqondo. Ukutya kwe-Alpha GPC nako kunokunyusa imveliso yehomoni yokukhula emzimbeni kwaye ngenxa yoko, iimbaleki ezijikeleze umsebenzi zisebenzisa izongezo zeAlpha GPC ukuphucula amandla azo onke.
Izongezelelo zeAlpha GPC zizisa kunye nezibonelelo ezininzi ezinokubakho. Ukuqala, iAlfa GPC yaziwa ngokuba iphucula impilo yengqondo kunye nokusebenza. Ikwenza oko ngokwandisa amanqanaba e-dopamine kunye nomzimba. Izifundo ezininzi ziye zadibanisa eli khompawundi kunye nomsebenzi ophuculweyo wememori kunye nokukwazi ukufunda. Kwezinye iimeko ezithile, izongezo ze-alpha GPC zikwazile ukubuyisela imemori nangona iimeko ezinjalo zikude kwaye zimbalwa. Ngaphandle kokuphucula ukusebenza kwengqondo kunye nokuqonda, kukho ubungqina obaneleyo bokungqina ukuba i-Alpha GPC inokusetyenziselwa ukunyanga isifo i-Alzheimer's, iintlobo ezahlukeneyo zesifo sengqondo esixhalabisayo, kunye nokuhlaselwa kweschemic okwethutyana. Ikhompawundi ikwasetyenziswa ziimbaleki njengoko ikhulisa ukusebenza kwazo. Ukuqukumbela, i-alpha GPC inezibonelelo ezininzi ezimiselweyo, into ephambili eyongeze ukuthandwa kwayo kule minyaka idlulileyo.
I-Alpha GPC sisicwangcisi se-acetylcholine esibekiweyo esinokuthi sandise ukukhula kwe-hormone yokukhusela ngokusebenza kwe-acetylcholine-evuselelekileyo i-catecholamine.
Asifumananga mibutho ibalulekileyo kuhlalutyo oluhambelanayo lonxibelelwano phakathi kweplasma choline kunye neempawu zoxinzelelo. Kolu phononongo lusekwe kubemi, ukugxila kwe-choline kwakudityaniswa kakubi neempawu zoxinzelelo kodwa hayi neempawu zoxinzelelo.
I-Alpha Brain inezithako ezibini ezonyusa amanqanaba e-acetylcholine: I-GPC choline, eguqula umzimba ube yi-acetylcholine, kunye neHuperzine A, ialkaloid evela kwiklabhu yaseTshayina moss, ekwabizwa ngokuba yiHuperzia serrata.
I-CDP ye-choline sisiyobisi esikhuselekileyo, njengoko iimvavanyo zetyhefu zibonisile; ayinampembelelo imbi kwinkqubo ye-cholinergic kwaye inyamezeleke ngokugqibeleleyo.
Iziphumo ezinokubakho ze-noopept zibandakanya ukuphazamiseka kokulala (i-5/31 yezigulana), ukuba nochuku (3/31), kunye noxinzelelo lwegazi olonyukayo (7/31) (Neznamov kunye neTeleshova, 2009). Iindlela zokwenza ezivela kuphando lwaphambi kophononongo olunye olwenziwe kwiintonga luxele ukuba i-noopept inqumle isithintelo sobuchopho begazi.
Kungenzeka ukuba i-Alpha GPC iphucule ukuyilwa kwememori kunye nokuphucula amandla okufunda. I-Alpha GPC inokuphakamisa amanqanaba e-dopamine, ethi izuze ukusebenza kwengqondo kakhulu.
Ndiziva ndixhalabile okanye ndingazoli.
Isibindi esinamafutha, kungenjalo saziwa njengesifo esingesiso sotywala esinamafutha (i-NAFLD)
I-necrosis yezintso ezophayo.
I-Choline inokunyusa ukusebenza kwememori, ukuphucula ukukhula kwengqondo kunye nokunyanga uxinzelelo kunye nokunye ukuphazamiseka kwengqondo.
Eyona mithombo yokutya ityebileyo ye-choline yinyama, intlanzi, ubisi kunye namaqanda. Iziqhamo ezininzi, imifuno, kunye neenkozo ezipheleleyo ziqulathe i-choline ngokunjalo, ngenxa yoko zininzi izinto onokukhetha kuzo abantu abatya imifuno okanye izidlo ezisekwe kwizityalo.
IiVithamini ezininzi aziqukethe i-choline.
Nangona ukutya okunotye kwi-choline-isibindi, izikhupha zamaqanda, kunye nenyama ebomvu-zihlala ziphezulu kumanqatha agcweleyo, i-choline ikwafumaneka kukutya okusezantsi kumanqatha agcweleyo kubandakanya isalmon, ikhowudi, itilapia, ibele lenkukhu, kunye nemidumba.
Okwangoku, akukho luvavanyo lonyango lunokusetyenziswa ekuchongeni abantu abanesiphene se-choline. I-Plasma choline, i-betaine, kunye ne-phosphatidylcholine ye-concentrations yehlile ebantwini batya ukutya okungonelanga kwe-choline, kodwa ke ithafa emva kokuwa kwe-30% -50%.
Inencasa eswiti kuyo enokuthi iqatshelwe kuphela. Ngokuqinisekileyo ayisiyonto ethatha indawo yeswekile kuye wonke umntu.
Izifundo ezikhulu zokujonga ukudibanisa ukutya kunye namanqanaba egazi ekuphuculeni ukusebenza kwengqondo, kubandakanya inkumbulo kunye nokusebenza okungcono. Ukuxhasa nge 1,000 mg ngemini kukhokelele kuphuculo lokukhumbula ixesha elifutshane kunye nelide kubantu abadala abaneminyaka eyi-50-85 abanememori engalunganga.
I-Citicoline ligama lesithako esimbaxa esifana ne-cytidine-diphosphocholine (i-CDP choline). Umahluko kuphela kukuba i-CDP ye-choline yenzeka ngokwendalo ebantwini, kwaye i-citicoline yeyona fomu ifumanekayo kwizongezo zesondlo.
I-Citicoline inyusa unxibelelwano lweselfowuni ngokwandisa ukubakho kwee-neurotransmitters, kubandakanya i-acetylcholine, norepinephrine, kunye ne-dopamine. Ngamagama alula, icandelo le-choline le-citicoline lisetyenziselwa ukwenza i-acetylcholine, esisigqeba esilawulayo se-neurotransmitter kwingqondo yomntu.
I-Phosphatidylcholine yikhemikhali equlathe amaqanda, iimbotyi zesoya, lwemostade, ujongilanga nokunye ukutya. Igama elithi "phosphatidylcholine" ngamanye amaxesha lisetyenziswa ngokungafaniyo ne "lecithin," nangona ezi zimbini zahlukile. I-Choline yinxalenye ye-phosphatidylcholine, eyinxalenye ye-lecithin.
Kolu phononongo lusekwe kubemi, ukugxila kwe-choline kwakudityaniswa kakubi neempawu zoxinzelelo kodwa hayi neempawu zoxinzelelo.
Utshintsho kumanqanaba eplasma I-choline okanye yee-amino acid ezithile zikhokelela kutshintsho kumanqanaba obuchwephesha bezinto ezingaphambi kwale ze-neurotransmitters-choline ye-acetylcholine, tryptophan ye-serotonin, kunye ne-tyrosine yee-catecholamines.
ukugcwala amathe ngokugqithisileyo.
ivumba lomzimba eliyintlanzi.
Kuxelwe ukuba i-choline idlala indima ebalulekileyo kwimetabolism yamafutha; iphula amanqatha ukuze isetyenziswe njengomthombo wamandla. Eli nyathelo le-choline liyenza ibaluleke ekuthinteleni iimeko ezinje ngesibindi esinamafutha okanye amafutha amaninzi egazini.
I-Lecithin isetyenziselwa ukunyanga ukuphazamiseka kwememori okunje ngokuba nesifo sengqondo esixhalabisayo kunye nesifo i-Alzheimer's. Isetyenziselwa ukunyanga isifo se-gallbladder, isifo sesibindi, iintlobo ezithile zoxinzelelo, cholesterol ephezulu, uxinzelelo kunye nesifo sesikhumba esibizwa ngokuba yi-eczema.
Inokubangela iziphumo ebezingalindelekanga kwabanye abantu kubandakanya ukubetha kwentliziyo, intloko ebuhlungu, isiyezi kunye nerhashalala. Xa unikezwe ngompu: I-Alpha GPC inOKHUSELEKILEYO xa isetyenziswe ngokufanelekileyo. Inokubangela iziphumo ebezingalindelekanga kwabanye abantu kubandakanya ukubetha kwentliziyo, intloko ebuhlungu, ukulala, ukudideka, kunye nokubomvu kwindawo yenaliti.
Ezona ndlela zixhaphakileyo ekutyeni yi-phosphatidylcholine (PC), phosphocholine, alpha-gpc, sphingomyelin, CDP-choline, kunye ne-choline yasimahla. I-Phospholine, i-choline yasimahla, kunye ne-alpha-gpc ziyanyibilika emanzini, ngelixa i-phosphatidylcholine kunye ne-sphingomyelin zityebile.
I-Alpha Brain yenye yezona zixhobo zikhuselekileyo ze-nootropic. Nangona kunjalo, unokufumana ezinye iziphumo ebezingalindelekanga ezincinci ngokunxibelelana kwamayeza okanye xa usitya ngaphezulu kokufunekayo. Kungenxa yoko le nto kufuneka unamathele kumthamo ocetyiswayo kwaye kufuneka ubonane nogqirha wakho ngaphambi kokuba uthathe nayiphi na into yokuxhasa i-nootropic.
Zonke izifundo ezenziweyo ukuhlalutya iziphumo ezahlukeneyo zeAlf GPC kwimisebenzi eyahlukeneyo yomzimba ziyavuma ukuba ikhemikhali, xa ichithwe ngaphakathi kwemida yayo yemihla ngemihla, ikhuselekile ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, ukubambelela kakhulu kwe-Alpha GPC kunokukhokelela kwiziphumo ebezingalindelekanga, ezinjengeentloko ebuhlungu, ukubetha kwentliziyo, ukungalali kunye nesiyezi. Okubaluleke kakhulu, abasetyhini abakhulelweyo nabancancisayo akufuneki basebenzise eli khomputha njengoko kungekho sifundo senziweyo ukuza kuthi ga ngoku sokufunda iziphumo zeAlf GPC kwabasetyhini abakhulelweyo. Ngokukwanjalo, ukuba imeko yakho sele ikho ngaphambili, kungcono ukubonisana nodokotela wakho ngaphambi kokuqala nangasiphi na isongezelelo se-Alfa GPC.
Kodwa kukho ezinye iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho, kubandakanya iintloko, uxinzelelo kunye nokuqaqanjelwa sisisu.
Xa kuthathwa iidosi ezinconyelwayo i-Alpha GPC inyamezeleka kakuhle. Uninzi lwabantu abadala uluhlu lweedosi ezamkelekileyo lubanzi ngokuthelekisiweyo; idosi yemihla ngemihla eqokelelweyo ye-300-1200 mg, xa ithathwa kumthamo omnye okanye emibini, ikhuselekile kwaye isebenza ngokufanelekileyo.
Ukusetyenziswa gwenxa kwee-nootropics-nayiphi na into enokuthi iguqule, iphucule, okanye yonyuse ukusebenza kwengqondo, ikakhulu ngokuvuselela okanye ukuthintela ii-neurotransmitters ezithile-ezinokuba yingozi kwaye zonakalise kwingqondo yomntu, kunye nabantu abathile abanembali yokusetyenziswa kwengqondo okanye iziyobisi ukuphazamiseka kunokuba.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, abantu baqale ukunikela ingqalelo ngakumbi kwimizimba yabo. Incoko ejikeleze impilo yengqondo iye yomelela kakhulu njengoko ingqondo isebenza njengeziko lolawulo lomzimba uphela kwaye nakuphi na ukungasebenzi kakuhle kwengqondo kunokukhokelela kwiziphumo ezibi. UCholine udlala indima ebalulekileyo ekugcineni impilo yengqondo kunye nokuphucula ukusebenza kwengqondo. Ke, uninzi lwezongezo zokutya ngoku zibandakanya iikhompawundi ezibonelela nge-choline emzimbeni. Elinye lala macandelo yiAlfa GPC.
Ikofu ithathwa njenge-nootropic kuba iqulethe icaffeine. I-caffeine yi-nootropic eyaziwayo eyonyusa ubukhulu becala ukuphaphama kunye nomoya. I-Nootropics, ekwabizwa ngokuba "ziziyobisi ezinobuchule" inceda ukuphucula imisebenzi yokuqonda, inyusa inkumbulo kunye nokusebenza kwengqondo.
Isifundo esenziwe ukuqonda isiphumo se I-alpha GPC kwimveliso yamandla kutyhilwe ukuba idosi ye-600 mg ibangela ukwanda kwimfihlo yokukhula kwehomoni. Ke, idosi esemgangathweni yealpha GPC ihlala iphakathi kwama-300 ukuya kuma-600 mg kwaye iimbaleki ziyacetyiswa ukuba zinamathele kumda ophezulu.
Nangona kunjalo, xa kufikwa kunyango lokwehla kwengqondo, phantse zonke izifundo ezihlalutye isiphumo seAlpha GPC ekusebenzeni kwengqondo zisebenzisa idosi esemgangathweni ye-1200 mg ngosuku, yahlulwe yangamanani amathathu e-400 mg. Ukwehla kwesi sixa semithamo akunakuba neziphumo ezifanayo njenge-1200 mg yedosi ngosuku. Ke, abaguli abanesifo se-Alzheimer's, isifo sengqondo esixhalabisayo, kunye ne-TIA bahlala becetyiswa ukuba babambelele kwi-1200mg / ngosuku yedosi.
Ngenxa yoluhlu olubanzi lwezibonelelo zezempilo, i-CBD ithathwa njenge-nootropic. Abaphandi abaninzi banomdla malunga namandla e-CBD okunceda kwimiceli mngeni yengqondo efana noxinzelelo, uxinzelelo noxinzelelo.
① Iyasebenza kuNyango lwe-Alzheimer's
Ukutyhubela iminyaka kuye kwenziwa izifundo ezininzi ukufundisisa ubuchule beli khompawundi ukunceda kunyango lwe-Alzheimer's. Olunye uphononongo olunje luveze ukuba iAlpha GPC inyusa inqanaba le-acetylcholine kwingqondo. I-Acetylcholine inxulunyaniswa nokusebenza kwengqondo okuphuculweyo kunye nokuphuculwa kokuqonda. Okubaluleke ngakumbi, uphononongo lukwatyhile ukuba kubantu abanexinzelelo, iAlpha GPC inciphise ukudumba okujikeleze imithambo yegazi kwingqondo, ngaloo ndlela ikhokelela ekusebenzeni kwengqondo okuphuculweyo.
Uphando lukwabonakalisile ukuba abaguli abanesifo se-Alzheimer banokuzuza ngokuthatha i-1200 mg ye-alpha GPC mihla le. Le dosi icetyiswa ixesha leenyanga ezi-3 ukuya kwezi-6 kwaye iphucula kakhulu izakhono zokucinga zabantu abaphethwe sesi sifo sibulalayo.
② Iyanceda kuNyango lwe-Dementia
Abantu abaninzi bayabhideka phakathi kwesifo sengqondo esixhalabisayo kunye neAlzheimers. Ke, kubalulekile ukumisela umahluko phakathi kwezi zimbini zokuqala. Isifo sengqondo esixhalabisayo ligama eliqhelekileyo elisetyenziselwa ukuchaza ukwehla kwengqondo yomntu ukuya kuthi ga apho ukwehla kuqala ukuphazamisa imisebenzi yemihla ngemihla yomntu. Isifo i-Alzheimer ayisosifo sengqondo esixhalabisayo kodwa sisifo esithile esisesinye sezona zinto zixhaphakileyo kwisifo sengqondo esixhalabisayo.
Kwiminyaka edlulileyo, izifundo ezininzi ziye zenziwa ukufunda ngefuthe lokutya kwe-alpha GPC kwizigulana ezinesifo sengqondo esixhalabisayo. Olunye uphando lubonise ukuba ukuthatha rhoqo i-alpha GPC ngaphezulu kweenyanga ezintandathu kuphuculwe ukuqonda kunye nokusebenza kwizigulana ezinobuthathaka bokuwohloka komqondo. Ngokufanayo, esinye isifundo sidibanisa ukusetyenziswa kwe-alpha GPC eqhelekileyo kunye nokuphuculwa kwengqondo kwizigulana ezinesifo sengqondo esixhalabisayo kunye nesifo secypbrovascular. Ukuqukumbela, abantu abanesifo sengqondo esixhalabisayo banokuxhamla kakhulu ekuthatheni i-1000 mg ye-Alpha GPC kwidosi yemihla ngemihla. Kwizigulana ezinjalo, ukuthathwa kweAlf GPC kudityaniswa nokuziphatha okuphuculweyo, imvakalelo, kunye nengqondo.
③ Isetyenziselwa ukuNyanga uHlaselo lwe-Ischemic oluThutyanayo
Ukuhlaselwa okwexeshana kwe-ischemic (TIA) zeziqendu ezifutshane zokungasebenzi kakuhle emzimbeni, zihlala zibangelwa kukuphazamiseka ekunikezelweni kwegazi kwingqondo nakwiliso. Uhlaselo lwe-ischemic lwexeshana luhlala luhlala nje imizuzwana embalwa kodwa lubonwa njengangaphambi kokubetha. Isifundo senziwa ukuze kufundwe isiphumo se-Alfa GPC kwisifo sokubetha kunye nezigulana ze-TIA. Olu phando luveze ukuba abantu abathathe i-1200-mg ye-Alpha GPC isithuba semihla engama-28, balandelwa ngu-1200 mg / usuku lwe-Alfa GPC (ngamanyathelo omlomo) kwiinyanga ezintandathu, babonisa izakhono zokucinga ezingcono kunye nokuvuselelwa okungcono kwi-TIA .
④ Yenza i-Nootropic Supplement esebenzayo
I-Acetylcholine yikhemikhali esebenzayo into esebenza njenge-neurotransmitter kwaye ibalulekile kwimemori kunye nasekufundeni imisebenzi. I-Alpha GPC yonyusa le khemikhali ngaphakathi kwengqondo, ngaloo ndlela ikhokelela kwimemori eyaphuculweyo kunye nokuqonda. Ke, i-alpha GPC ihlala isetyenziswa njengecandelo eliphambili kwizongezo zokutya ezenziwa yi-nootropic.
⑤ Iphucula iNdlela yokuSebenza
Kwimbaleki, ukungena kwe-alpha GPC kudityaniswa nokunciphisa umzimba okunyanzelise i-choline. Okubaluleke ngakumbi, kunxulunyaniswa nokwanda kokuveliswa kwehomoni kunye nokunyusa umgangatho wokusebenza. Ke, abaqeqeshi kunye nabaqeqeshi bahlala bacebisa iimbaleki ukuba zisebenzise i-alpha GPC ukufezekisa ukuphuculwa kwemisipha.
(1). I-US National Library of Medicine Iziko leLizwe lezeMpilo, uGatti G, Barzaghi N, Acuto G, Abbiati G, Fossati T, Perucca E., 1992 Sep; 30 (9): 331-5.
(2). UDoggrell SA kunye noEvans S; Evans (Okthobha 2003). "Unyango lwesifo sengqondo esixhalabisayo kunye nokumodareyitha kwe-neurotransuction". Uluvo lweengcali Ukuphanda iziyobisi. I-12 (10): 1633-1654.
(3). UParnetti, uLucilla; okqhubekayo. (2007). "Umanduleli we-Cholinergic kunyango lokuphazamiseka kwengqondo: iindlela ezingasebenziyo okanye isidingo sovavanyo kwakhona?". Ijenali yeeNzululwazi zeNeurological. 257 (1–2): 264–9.
(4). Uhambo lokujonga umz.
(5). I-Oleoylethanolamide (oea) -i-wand yemilingo yobomi bakho.
(6). I-Anandamide vs cbd: yeyiphi engcono kwimpilo yakho? Yonke into ekufuneka uyazi ngabo!
(7). Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-nicotinamide riboside chloride.
(8). Izongezo zeMagnesium l-threonate: izibonelelo, idosi, kunye neziphumo ebezingalindelekanga.
(9). Palmitoylethanolamide (ertyisi): izibonelelo, idosi, ukusetyenziswa, isongezelelo.
(10). Izibonelelo zezempilo ezi-6 eziphezulu ze-resveratrol supplements.
(11). Izibonelelo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-phosphatidylserine (ps).
(12). Izibonelelo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-pyrroloquinoline quinone (pqq).
(13). Olona nyango lulungileyo lokuguga lwenicotinamide mononucleotide (nmn).
I-Alpha-gpc ngokuqinisekileyo yenye yezona nootropics zibalaseleyo kum. Ndisebenzisa i-150mg ngeentsuku ndifuna ukonyusa ingqondo.
Into endimangaliswe kakhulu ngayo kukukwazi ukonyusa ukusebenza kweembaleki kunye nokubuyisa kakuhle. Njengomdlali webhola yomnyazi, ngokuqinisekileyo yi-PED ngokuqinisekileyo. Uziva ngakumbi kulawulo lomzimba wakho kunye nendlela ohamba ngayo, iintshukumo ezintle zemisipha kunye nolungelelwaniso lwandiswe kakhulu.
Ndithatha kuphela i-300mg ngoku. Uyithathe iinyanga ezi-2 ngqo. Akukho xinzelelo. Amandla nje ejimini.
Ndithatha i-300mg kusasa yonke imihla. Ndandizifumana ndidandatheka emva kweeveki ezithile kwiminyaka embalwa yokuqala, ngoko ke ndandithatha ikhefu iintsuku ezimbalwa. Ngoku xa ndithatha ikhefu ndize ndibuyele kuyo, indibetha ngamandla kwaye ndifumana amaphupha afanelekileyo ubusuku okanye ezimbini. Hayi ubuthongo obunzulu kakhulu. Asiyonto ndiyithandayo. Iwusombulule umba wobomi bonke wobunzima bengqondo kum. Ngoku ndinikela ingqalelo ngakumbi yaye ndiphaphile, yaye ndinamandla angakumbi. Ndiyaqaphela wonke umntu othi ucinezelekile kuyo-kwaye ndiyavuma ukuba ukudakumba okukhulu kwe-choline yeyona nto imbi kakhulu emhlabeni kwaye iya kuyonakalisa ngokwenene imini yakho. Ke ukuba nabani na ufunda le nto kwaye ucinga ukuyizama, qala kwelona thamo lisezantsi, mhlawumbi yonke enye imini okanye ngaphezulu, kwaye ujonge indlela oziva ngayo.
Kum isebenza kakuhle. Ngokwenyani bendingalindelanga kakhulu kodwa ngalo lonke ixesha ndiyithatha ndiziva ndigxile ngakumbi kwaye ndonyusa inkumbulo.
Ndifunda kakhulu ke iziphumo ziye zabonakala kum. Ndithatha i-150-300 mg.